iOS 14: pachave neve new fitness app nemavhidhiyo ekudzidziswa kutungamirirwa | IPhone nhau
iOS 14: pachave neve new fitness app nemavhidhiyo ekudzidziswa kutungamirirwa
Mune iyo kodhi kubva muchikamu chekare cheiyo inotevera iOS 14 iyo yakaburitswa, nhau dzinoramba dzichioneka. Zvishoma nezvishoma, zvitsva zvinowonekwa izvo zvatove zviripo mune kodhi yeiyo nyowani vhezheni yeIOS. Iye zvino yave nguva yekushandisa nyowani kuita kugwinya.
Sezvinoonekwa, chichava chishandiso uko iwe kwaunogona kurodha mavhidhiyo anoshanda segwara rezviitwa zvakasiyana uye kurovedza muviri. Zvakanaka, zvinogona kunakidza. Tichaona.
Apple inoita kunge iri kuvandudza chirongwa chitsva chefitness ye iPhone, Apple Watch, uye Apple TV. Iwe unenge uine muunganidzwa wemavhidhiyo kurodha pasi nemamakirasi akatungamirwa eakasiyana maekisesaizi uye kurovedza muviri zvese mune yekurovedza muviri nekunze.
Ichi chishandiso chitsva parizvino chine zita rekodhi "Seymour", uye pakupedzisira inogona kunzi Fit kana Fitness mune yekupedzisira vhezheni. Ichave iripo muIOS 14, watchOS 14 uye tvOS 14. Ichave iri yega yekushandisa kubva kune iripo "Chiitiko".
Neichi chiitiko chitsva chekusimbisa muviri, vashandisi vanozokwanisa kurodha mavhidhiyo akasiyana emakirasi emakosi ekudzidzira uye kudzidziswa, kubva pakareji yakakura yakafukidza yakawanda mitambo, uye kugona kuongorora kufambira mberi kwako nekuda kwema sensors eApple Watch.
Inotaridza senge Ichi chishandiso chichaenderana neApple Watch uye chimwe chishandiso uko chinokuratidza iyo vhidhiyo yekudzidziswa yekuteveraPamwe pane iyo iPhone, iPad kana Apple TV. Iyo Apple Watch ichave iyo inorekodha iyo data yerovedzo yako kuti ugone kuenzanisa ivo nekirasi yevhidhiyo.
Iko hakuna-mukati-app ekutenga masaini mukodhi, saka ingangoita yemahara zvachose yakavakirwa-mukati iOS app. Zvinotaridza kuti Apple iri kushanda pamhando dzakasiyana siyana dzezviitiko, zvinosanganisira kumhanya kwemukati, kuchovha bhasikoro, kukwasva, kutambanudza, kudzidziswa kwekutanga, simba rekudzidzisa, kufamba kwekunze, kutamba, uye yoga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » iOS 14: pachave neve new fitness app nemavhidhiyo ekudzidziswa kutungamirirwa
Zvinhu Zvinhu murongi zvinouya kuApple Watch uye inozvimiririra neiyo iPhone